ဆယ်ကျော်သက်နဲ့ ပြစ်ဒဏ် – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Author lettwebawPosted on 13 April 2011 27 September 2011 Categories Discussion, FM Broadcasts, Parenting
22 thoughts on “ဆယ်ကျော်သက်နဲ့ ပြစ်ဒဏ်”
hninn naing says:
13 April 2011 at 10:30 pm
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာ ရှဲခွင့် ပြုပါဆရာ… :))
13 April 2011 at 10:34 pm
ဟုတ်ကဲ့… သဘောရှိပါဗျာ… ခွင့်တောင်းတဲ့အတွက် ကျွန်ုပ်ကတောင် ကျေးဇူးတင်ရဦးမှာပါ။ ကျေးဇူးတင်းပါ၏ ဒေါ်နှင်းနိုင်… 😀
ဒီပိုစ်ကို ဖတ်ပြီး….”ဓါးသွား၊ လှံသွားထက် လျှာသွားက ပိုထက်တယ်” ဆိုတာလေးကို သတိရမိတယ်။ “ဆရာ” ဆိုတာနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး စာပေဟောပြောပွဲတစ်ခုက ကြားဖူးတဲ့..”မိကျောင်းဖွေးဖွေး မိုးအေးအေး” “ရွှေဇီဦး” တို့ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်တွေကို ရှင်းပြတာလေးကို သတိရမိတယ်။ မေတ္တာပင် ဖြစ်သော်ငြားလည်း ဒေါသ ပါလာတဲ့အခါ ချစ်ရာ မရောက်ပဲ နစ်..ရာ ရောက်ကြောင်း ခံစားမိပါတယ်။
13 April 2011 at 11:18 pm
if possible ဆယ်ကျေ်ာသက်မဟုတ်သော် ဒီဆောင်းပါးအပေါါ်
အဲဒီ ဆရာမကို သက်ဆိုင်ရာက ဘာမှမလုပ်ကြဘူးလားဟင်။ နုနယ်သေးတဲ့ ကလေးစိတ်ကို စကားလုံးတွေနဲ့ဖိသတ်လိုက်တာ။ အဲဒီဆရာမ ထိုက်သင့်တဲ့ အပြစ်ဒဏ် ကျခံသင့်ပါတယ်။ နောက်ဆက်တွဲသတင်းလေး သိရင် ဝေမျှပေးပါ။
15 April 2011 at 4:10 pm
Facebook မှာ share ခွင့်ပြုတဲ့ဆရာ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ “လူကြီးတွေကလဲ “ဟဲ့… ကလေးမဟုတ်တော့ဘူးနော်”ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ ဟန့်တာလေးတွေ ရှိလာပြီ။ သို့သော် ကလေးဆန်တာကို ဟန့်ချင်တဲ့အခါမှာသာ ကလေး မဟုတ်တော့ဘူးလို့ ပြောကြတာ၊ သိပ်လူကြီးဆန်လာပြန်ရင်လည်း “အရွယ်လေးကဖြင့် လက်တောက်လောက် ရှိသေးတယ်”တို့၊ ”အခုမှ လူဖြစ်မယ် ကြံရုံရှိသေး”တို့၊ “ကလေးက ကလေးလို မနေဘဲ လူပျိုဂိုက်၊ အပျိုဂိုက်ဖမ်းနေတယ်” ဆိုတာမျိုးတွေကိုလည်း လူကြီး မိဘတွေက အခါအားလျော်စွာ ပြောဖြစ်နေတတ်ကြပြန်ပါတယ်။” ဆိုတာကိုသဘောအကျဆုံးပဲ..
Kyaw Myat Thu says:
29 May 2011 at 11:28 am
ဆရာ ဒီပိုစ့်လေးကို facebook မှာရှယ်လိုက်ပြီနော်…
23 July 2011 at 4:21 pm
ဆရာ့ရဲ့ ထိန်းမြားလက်ထပ်ရန်ဖြစ်လျက်ပင်ချစ်ကြင်နေနည်း စာအုပ်ဖတ်ချင်တယ်
23 July 2011 at 11:07 pm
ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ… ရှိပါတယ်… အခုတစ်လော ဆိုင်တချို့က ဘာဖြစ်လို့မှန်း မသိဘူး၊ သူတို့ပဲ အရောင်းအ၀ယ် မကောင်းလို့လား၊ တခြား အလုပ် ပြောင်းလုပ်ကြဖို့များ ကြံနေလို့လား မသိဘူး၊ ကျွန်တော်တို့ဆီက တချို့စာအုပ်တွေကို ရောင်းကောင်းလျက်နဲ့ မမှာကြဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ ရန်ကုန်ကဆိုရင် အရုဏ်သစ်တို့၊ စာပေလောက ၂ တို့၊ အင်းဝ (ပန်းဆိုးတန်းရော၊ ဦးထွန်းလင်းခြံလမ်းပါ) ဆိုင်တွေမှာ မလွဲမသွေ ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ် ခင်ဗျား။
27 July 2011 at 1:16 pm
28 July 2011 at 12:46 pm
ကျေးဇူးပါဆရာ။ စာအုပ်ရပါပြီး။ စာပေလောက(3) ကနေပါ။
24 July 2011 at 8:04 am
24 July 2011 at 7:24 pm
အလွန်တရာ အကျိုးရှိသော နေ့တစ်နေ့ အဖြစ် မှတ်ယူမိလိုက်ရပါတယ် ။
31 July 2011 at 9:22 am
သမီးတို့ ကျောင်းက ဆရာမတွေထဲမှာလဲ အဲလို ဆရာမတွေ ရှိပါတယ် ဆရာ… အင်တာနက်ဆိုင် သွားတဲ့ ကျောင်းသူကို စိတ်ဆိုးတာက စပြီး နင်တို့တွေ အပျိုရော စစ်ကြသေးရဲ့လားဆိုပြီး မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်းတွေပါ ပါအောင် တစ်ခန်းလုံးကို ဆဲတာ သမီး ကိုယ်တိုင် ကြုံခဲ့ရပါတယ်… အခု အဲဒီ ဆရာမက ဒုတိယ ကျောင်းအုပ်တောင် ဖြစ်နေပြီ ဆိုပါလား… ဆရာရယ်…
31 July 2011 at 11:05 am
ဒီ post လေးကို အခုမှ ဖတ်မိပါတယ်ဆရာ။ အဖတ်နောက်ကျလေခြင်းလို့ ခံစားမိပါတယ်။ share ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။
Zaw Lin Tun says:
20 August 2011 at 5:22 pm
Sometime most of the parents couldn’t notice about that and also important for their children.
Thank you for highlight that how to treat our children.
Myo Maw says:
12 January 2012 at 6:19 pm
ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းက ဆရာမစာသင်နေတုန်း စကားပြောမိလို့ အတန်းရှေ့မှာ ဒူးထောက်ခဲ့ရတာကို သွားသတိရမိတယ်..ရိုးရိုးထောက်ခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူး…ဆရာမစားထားတဲ့ ဇီးစေ့တွေကို ဒူးခေါင်းအောက်မှာထားပြီး ဒူးထောက်ခဲ့ရတာ…ဒီကြားထဲ လက်ကိုလည်း မြောက်ခိုင်းထားသေးတယ်…တခြားအတန်းက ဖြတ်သွားဖြတ်လာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေက ဘာဖြစ်တာလဲ လို့မေးမေးသွားကြတယ်…ဘာမှပြန်မဖြေနိုင်ခဲ့ဘူး…နာလည်းနာ ရှက်လည်းရှက်…မျက်ရည်ဆိုတာ တောက်တောက်ကိုကျရောပဲ..။ နောင်ကျဉ်သွားအောင် အပြစ်ပေးတယ်ဆိုပေမယ့် ညီမျှခြင်းချလို့မရတဲ့ ပြစ်ဒဏ်မျိုးတွေ မပေးမိအောင် ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားကြရပါမယ်။
ဆရာ ကျွန်တော်က အရမ်းနောက်ကျပြီးမှ ဆရာ့အိမ်ကို ရောက်ခဲ့ရသူပါ။ “ဆယ်ကျော်သက်နှင့် အပြစ်ဒဏ်” ဆိုတာလေး ဖတ်ပြီး အရမ်းကို သဘောကျမိတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလဲ ဆရာပြောတဲ့ လူကြီးတစ်ယောက်လို ဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့် အသိညာဏ်လေး ရအောင် ရေးသွားပေးတဲ့ ဆရာ့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။ ဒီပို့(စ်)ကို facebook မှာ ပြန်တင်ခွင့် တောင်းပါတယ်ဆရာ။
8 June 2013 at 11:38 pm
ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ၊ ခွင့်တောင်းတဲ့အတွက် လေးစားစွာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် site ကို ရည်ညွှန်းပြီး ပြန်တင်နိုင်ကြောင်းပါ ခင်ဗျား။
9 June 2013 at 9:55 am
ဆရာရေးတဲ့ စာတွေကို အတော်များများဖတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအတွက်ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်။ ပို့(စ်)တစ်ခုစီတိုင်းမှာ အင်မတန်မှတ်သားစရာ ကောင်းတဲ့ အချက်တွေအများကြီးပါ ပါတယ်။ ” နှုတ်မှုရေးရာ စဉ်းစားစရာ” ဆိုတဲ့ ပို(စ်)ကိုလည်းအတော်သဘောကျပါတယ်။ ဒီပို(စ်)ထဲမှာပါတဲ့ ကောင်မလေးကိုဆုံမတဲ့ဆရာမ
က အတော်ကို အဆင်အခြင်မဲ့တာပဲ။ ဒီအတွက်အဲဒီလိုမျိုး ဆရာ၊ ဆရာမမျိုးကို အပြင်းအထန်ဝေဖန်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ထင်တယ် အဲဒီဆရာမက အပျိုကြီးပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ချို့တွေက သားသမီးမရှိတော့ ကိုယ်ချင်းစာစိတ် မရှိကြပါဘူး။ ကျွန်တော် ဆယ်တန်းတုန်းက ဆရာတစ်ယောက်က ကျွန်တော့် နဲ့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကို လူတောထဲမှာ အရှက်ခွဲတယ် တကယ်တော့လည်းကျွန်တော်တို့မမှားပါဘူး။ ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာ ခုအချိန်အထိ အစိုင်အခဲကြီးဖြစ်နေတုန်းပါ။ အေးအေးဆေးဆေးခေါ်ပြီး ဆုံးမရင်လည်းရပါတယ်။ လက္ခံပါတယ် ဒါပေမယ့် လူတောထဲမှာ အရှက်ခွဲခံခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီကောင်မလေးကို ကိုယ်ချင်းစာတယ် နားလည်ပါတယ်၊ ဒီလို ကိုယ်ချင်းစာစိတ်မရှိ၊ အသုံးမကျ၊ မဆုံးမတတ်တဲ့ ဆရာမတွေ ရှိနေသ၍တော့ နောင်လည်း ဒီလည်းဒီလိုသတင်းတွေကြားနေရအုံးမယ်ထင်ပါတယ်၊ ဒီပို(စ်)ကို ဖတ်ရတာစိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ဆင်ခြင်စရာ ဗဟုသုတတော့ရပါတယ် ဆရာ။ ဆရာခင်ဗျာ ဆရာရေးတဲ့ တစ်ချို့ပို(စ်)တွေကို ကျွန်တော်ကူးယူထားချင်ပါတယ်၊ တစ်ချို့စာတွေ မဖတ်ရသေးလို့ပါ အလုပ်အားတဲ့ အချိန်ဖတ်ချင်လို့ပါ။
15 June 2013 at 9:42 am
ကျွန်တော် ၈ တန်းတုန်းက ပထမဆုံး ကျောင်းပြေးပြီး ရေသွားကူးဖူးတယ် ကျောင်းမှာ ကျွန်တော့်အမေလည်း စာသင်တယ်ဗျ… aနာက်နေ့ ကျောင်းတတ်တော့ ကိုယ့်အမေက ကျောင်းဆရာမ… ဆရာမသားတစ်ယောက်က အဲလိုလုပ်ရလားဆိုပြီး အတန်းပိုင်ဆရာမက…..တစ်တန်းလုံးရှေ့မှာ ပြောပြီး တစ်နာရီ ဒူးထောက်ခိုင်းတယ်ဗျာ… အစကတော့ အရမ်းရှက်တာပေါ့… တစ်ချို့ ကျောင်းသားတွေက ကျွန်တော့်ကို ဆရာမသားဆိုပြီး ကြည့်မရတဲ့ လူတွေရှိတယ်။ သူတို့ကိုလည်း ရှက်တယ်… နည်းနည်းကြာလာတော့ သူတို့ကို ပြန်သနားလာတယ်ဗျ…. ငါ ပျော်ပြီး ရေကူးနေတဲ့ အချိန်တွေမှာ သူတို့ကတော့ အတန်းပိုင်ဆရာမရဲ့ အဆူခံ အဆဲခံပြီး စက်ရုပ်တွေလို နေနေရတာဆိုတဲ့ အတွေးဝင်လိုက်ပြီးကတည်းက ကျွန်တော် လွတ်လပ်သွားတယ်ဗျာ…. ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း ဂရုမစိုက်တတ်တော့ဘူး… နောင်တဆိုတာလဲ သတိမပြုမိတော့ဘူး… အခုဆို ကျွန်တော် ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ကျွန်တော်ရပ်တည်သွားနိုင်တယ်ဗျ… မကြောက်တော့ဘူး… ဘယ်သူ့ကို ကျေးဇူးတင်ရမှန်းလည်း မသိဘူး အတန်းပိုင်ဆရာမကိုလား ကျွန်တော့်ကို အမြင်ကပ်တဲ့ ကျောင်းသားတွေကိုလား…
Previous Previous post: တီကောင်နဲ့ လိပ်ပြာ
Next Next post: ခါထုတ် နင်းတက်